Kuthiwa amasosha mawaqinise isandla - Ilanga News
Home Izindaba Kuthiwa amasosha mawaqinise isandla
Kuthiwa amasosha mawaqinise isandla
Zizohlolelwa iCovid-19 zonke izakhamizi zeTheku
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ukhuthaze abezo-mthetho ukuqinisa isandla ezakhamizini ezingayilandeli imiyalelo kamengameli.
UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ukhuthaze abezomthetho ukuqinisa isandla, baqinisekise ukuthi izakhamizi zeTheku namaphethelo ziyayilandela imiyalelo ebekwe ngumengameli wezwe yokugonqa ukunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.
Lokhu ukusho izolo ngeSonto esigcawini sabezindaba lapho ezwakalise ukuthi sebetholile ukuthi intsha eningi, ikakhulukazi emalokishini, iyazicanasela nje, kayazi nokuthi lidumephi.
Ukhale ngokuthi ukubhebhetheka kwaleli gciwane kubonakala kwenyuka kakhulu ezindaweni eziningi.
Uthi abakuqaphelayo wukuthi abantu kabayilandeli imiyalelo yokuzivikela, okuhlanganisa nokuqhelelana uma kubanjwe olayini. Uthi kuyethusa ukuthi kunabantu ababonakala bengazi nokuthi lidumephi ekubeni lesi sifo siyabhubhisa emhlabeni.
Uthe kuzohlolwa bonke abantu abakhele uMasipala weTheku ngaphandle kokubheka ukuthi bake baxhumana yini nomuntu onegciwane noma cha.
“Ukuze sinqande ukubhebhetheka kwalesi sifo, wonke umuntu oseThekwini uzohlolwa, okuhlanganisa nalabo abasezindaweni ezisemakhaya, kodwa ezingaphansi kweTheku,” esho.
Uthe okumele kuqondakale wukuthi lesi sifo kasikhethi bala nezinga lomuntu, njengoba sitholakala eMhlanga naKwaMashu ngokufanayo.
“Kubalulekile nokuthi sandise izindawo esizogcina kuzona labo abazotholakala ukuthi sebenaleli gciwane ngoba abaningi uma betholakala ukuthi banalo, kodwa kabaguli kakhulu, bayaye bayalelwe ukuyozivalela emakhaya, bangahlangani nabanye abantu, kodwa bangakwenzi lokho okubeka abanye engcupheni,” esho.
Uthi kusukela namhlanje ngoMsombuluko abazohlolwa batholakale ukuthi banaleli gciwane bazothathwa bayobekwa ezikhungweni ezahlukene baze bakhishwe uma sebelaphekile. Uphinde wagcizelela ukuthi amaphoyisa namasosha kumele aqinisekise ukuthi abantu bazivalele, wathi kakumele umuntu oKwaDukuza akwazi ukuhamba aze afike eThekwini.
“Abantu mabahlale lapho bekhona. Sicela abezomthetho ukuba baqinise isandla ekutheni abantu bangalokhu behla benyuka,” esho.
Uthe bazoqinisekisa ukuthi kuyalandelelwa ukwenziwa kophenyo ngokutheleleka kweziguli kwezinye zezibhedlela ezizimele zaseThekwini.
Uthe bakholelwa ekutheni kukhona ubudedengu obenzeke kulezi zibhedlela.
UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkk Nomagugu Simelane-Zulu, uthe sebezikhombile izindawo okuzoqalwa kuzona futhi bazoqala ngezifunda ezi-ngenazo kakhulu izibalo zabantu abanaleli gciwane, kuhlolwe wonke umuntu okhona bese beya-zivala kungabe kusangena muntu.
Uthe kabakujahile ukuba kukhishwe imiphumela yophenyo olwenziwa ngezibhedlela ezizimele, iSt Augustine’s neKingsway, njengoba ethi inhloso wukuba kutholakale ukuthi ukubhebhetheka kwalesi sifo okwenzeke kulezi zibhedlela, kudalwe yini.
“Nalabo abahlolwa batholakala benalesi sifo bayacelwa ukuba bahlale emakhaya bazivalele, kodwa uma bengakwenzi lokho sinohlelo lokubalanda sibafake ezikhungweni ngoba kumele senze konke okusemandleni ethu uku-nqanda ukubhebhetheka kwe-
UZikalala uthe balinganiselwa ku-83 abasezibhedlela ezizimele nezikahulumeni KwaZulu-Natal, kanti bathathu abasegunjini labagula kakhulu.
Uthe ukubamba kwabo isigcawu njengesifundazwe kakusho ukuthi sekunemithetho eqondene naso kuphela, kepha bafisa ukuba imiyalelo ekhishiwe ilandelelwe.
Uthi uma lungabikhona ushintsho, abaningi bazolahlekelwa yimiphefumulo benqotshwa yilesi sifo. Wathi kumele kucace ukuthi izinto ngeke ziqhubeke njengenjwayelo.
Previous articleUdlelwe imoto umdlali welePSL
Next articleuxoshe ummeli weminyaka emibili uzuma